कठै ! बिरोलोले मुसा मार्यो भनेर खुसी हुने हामी... Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 09:52:09
जापानी समय : 01:07:09
Tag: कठै ! बिरोलोले मुसा मार्यो भनेर खुसी हुने हामी…
कठै ! बिरोलोले मुसा मार्यो भनेर खुसी हुने हामी…
Posted on March 23, 2018 March 24, 2018 by Yadav Devkota
बिरालोले मुसा मार्यो भने त्यो आश्चर्य हुँदैन, तर मुसासंग दोस्ती गरेर भकारी रित्याउन सघायो भने त्यो आश्चर्य हुन्छ । अर्थात् प्राकृतिक, कानुनी नियम विपरीत गयो भने त्यो अनौठो र आलोच्य विषय बन्छ । किनभने हरेकको आआफ्नो काम र जिम्मेवारी हुन्छ ? त्यस्तो जिम्मेवारी प्रकृतिले निर्धारण गरेको हुन्छ, कानुनले तोकेको हुन्छ, अनि जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
सुरुवात नै बिरालो र मुसाबाट गरियो । बिरालोलाई विकास, सुशासन, स्थिरता अनि समृद्धि र भ्रष्टाचार अनि मुसालाई भ्रष्टाचार, कुरिती, अस्थिरताको प्रतीक मानेर यो आलेख अघि बढाइन्छ । प्रकृतिदेखि कानुनसम्मले, मतपत्रदेखि जनविश्वासले दिएको अधिकार र व्यवस्था अनुसार हरेकले काम गरिरहेको हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ आफूमा भएका क्षमता र गुण अनुसार मानिस मात्र हैन पशुपक्षी, जनावरले समेत त्यो भूमिका निर्वाह इमानदार भएर निर्वाह गर्छन् । यदि त्यसो गर्न नसके उसको अस्तित्व सकिन्छ ।
तर, नेपाल अपवाद हो यस मामलामा । नेपालका काम हैन, गफ गर्न सक्नेहरुको मात्र अस्तित्व छ । वडाको सानो तहदेखि सिंहदरबारसम्मै यस्तै गफाडीहरुको हालिमुहाली लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । काम गर्न नसक्नेहरुकै हैकम छ । काम गर्ला जस्तोको चर्चै छैन । उनीहरुलाई कसैले अवसर दिंदैनन् । यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छ । अर्थात् मुसामार्ने बिरालोहरु किनारा लागेका छन्, मुसासंगै मिलेर धान खानेहरु भकारीको वरिपरी छन् ।
प्राकृतिक नियम अनुसार बिरालोले मुसा मार्न छाड्यो भने बिरालोको अस्तित्व सकिन्छ । त्यस्तै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने कुनै ओहदामा बसेको मान्छे असक्षम हुन्छ, उ त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । जतिसुकै नालायक भए पनि उनीहरु टिकिरहेका छन् । हामीले नेता मानिरहेका छौं । मुसामार्न छोडेर मुसासंगै दोस्ती गरेर भकारी रित्याउने बिरालोबाटै आश गरिरहेका छौं । उसलाई बिरालो नै भनिरहेका छौं ।
यो किन भयो ? उत्तर सहज छ– सबै बिरालोहरु मुसासंग मिलेर भकारी रित्याउन लागिपरेका बेला केही त्यस्ता बिरालो देखिए जसले भकारी जोगाउन मुसा मार्ने संकेत गरे । नेपालमा दशकौंको बीचमा एउटा त्यस्तो बिरालो देखापर्ने गर्दछ जसले मुसा मात्रै मार्छ । नत्र मुसामार्ने आशमा पालिएका बिरालो सबै मुसासंग दोस्ती गरेर भकारी रित्याउने र टन्न खाएर चौबीसै घण्टा सुत्ने भए ।
एउटा प्रहरी अधिकृतले अपराधीलाई कुनै हालतमा नछोड्ने अडान राख्दै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न थाल्छ भने हामी उसको वाहवाही गर्छौं । यथार्थमा ती प्रहरी अधिकृतको काम नै त्यही हो । अर्थात्, ऊ मुसा मार्ने बिरालो नै हो र बिरालोले मुसा मार्यो भनेर हामी दंग पर्छौं । अब केही हुन लाग्यो भन्छौं ।
रमेश खरेल वा सर्वेन्द्र खनाल वा पुस्कर कार्कीहरुले प्रहरीले गर्नुपर्ने काम गरे । उनीहरुलाई वाहवाही गर्नपर्ने थियो त ? तर भयो त्यस्तै किनभने उनीहरु मुसासंग दोस्ती गर्नेहरुको भीडमा मुसाको शिकार गर्न निस्किए । गोकर्ण बिष्टले उर्जा मन्त्री हुँदा महसुल नतिर्नेहरुको विद्युत लाइन काटिदिए । यो कुनै ठूलो काम थिएन । मन्त्रालय वा विद्युत प्राधिकरणको सामान्य काम हो । तर, त्यहाँ मुसासंग दोस्ती गर्ने बिराहरु मात्र थिए । त्यसैले मन्त्रीले काम गरे । वाहवाही भयो । त्यस्तै जनादर्शन शर्मा र कुलमानन घिसिंगको काम पनि मुसा मार्ने नै थियो र मारे । अर्थात् जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरे । यो उनीहरुको जिम्मेवारी थियो र त्यसै गरे । हामी अत्यन्त दंग गर्नुपर्ने थिएन । किनभने हामीले उनीहरुलाई त्यस्तै कामका लागि पठाएका हौं ।
तर, बदमासको भीडमा कसैले राम्रो काम गर्दा हामीमा उत्साह पैदा हुन्छ, अब त केही हुन्छ कि भनेर अनि हामी उसको जयजयकार गर्छौं । कारण यसअघि त्यस्तो गर्ने मन्त्री नै थिएन । वास्तवमा ती मन्त्री पनि त्यही काम गर्छु भनेर त्यहाँ पुगेका हुन् भने उनले त्यस्तो काम गर्दा अनौठो र आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरै थिएन । तर यहाँ यस्तै छ । अनौठै मान्नुपर्छ । जिम्मेवारी पाएकाहरु बेजिम्मेवार भएपछि सानोतिनो नतिजामै हामी खुसी हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले सिंहदरबारको सयर गर्ने सबै बिरालाहरुले मुसा मात्रै मार्ने कसम खाएका छन् । उनीहरुको अहिलेसम्मको दैनिकी हेर्दा मुसा ढुकेर बस्ने मात्र देखिएको छ, झम्टिने हिम्मत उनीहरुमा छैन । उनीहरु द्विविधामा पनि छन्, मुसासंग दोस्ती त कुनै हालतमा गर्न सकिन्न, तर दुश्मनी पनि गर्न सकिन्न, अर्थात् मुसा मार्न सकिन्न । यस्तै मानसिकताको विकास हुँदाहुँदै कालान्तरमा दोस्ती मुसासंगै हुने र भकारीमा झन ठूलो प्वाल पर्ने त हैन ? अब हामी सधैं कहिले बिरोलोले मुसा मार्ला भनेर कुरेर बसिरहने ? मुसा नमार्ने बिरालो लखेटेर शिकारी बिरालो किन नपाल्ने ? आम जनताले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
पर्यटकहरु पिज्जा र बर्गर खान नेपाल आउँदैनन्
Posted in बिचारTagged कठै ! बिरोलोले मुसा मार्यो भनेर खुसी हुने हामी...